विश्वकै सेक्सी पुरुषको सूचिमा परे नेपालका आकास श्रेष्ठ - Nepali Mato
१० श्रावण २०७६, शुक्रबार १५:२० July 26, 2019 Nepali MatoLeaveaComment on विश्वकै सेक्सी पुरुषको सूचिमा परे नेपालका आकास श्रेष्ठ
‘म त तिम्रै हुँ ‘ फिल्मबाट नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा भित्रिएका नायक आकास श्रेष्ठको अहिले निकै चर्चा छ । उन आफनो चकलेटी लुक्सका कारण चर्चामा त थिए नै अहिले उनको चर्चा झन चुलिएको छ । मोडलिङ हुँदै फिल्ममा उदाएका आकासलाई डेब्युले चर्चा नदिएपनि पछिल्लो समय रामकहानीबाट पनि धेरै हदसम्म क्लिक भए ।
आकासको युवतीहरुमाझ बिषेश क्रेज देखिएको छ । कम बोल्ने र चकलेटी लुक्सका कारण युवायुवतीमाझ उनी लोकप्रिय छन् । उनै लोकप्रिय नायक आकास श्रेष्ठ सेक्सीएस्ट म्यान अफ द वर्ल्ड २०१८ को सूचिमा पर्न सफल भएका छन् । वर्ष २०१८ को ‘सेक्सीएष्ट म्यान अफ द वर्ल्ड’को सूचि हालै सार्वजनिक भएको हो जहाँ आकासले नेपालबाट ८८ औं नम्बरमा आफनो स्थान बनाएका हुन् ।
आकासले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल इन्सटाग्राममा एउटा स्टोरी हाल्दै आफू सेक्सीएष्ट म्यान अफ द वर्ल्ड को सूचिमा परेको खुलासा गरेका हुन् । ।उनी यस सूचिमा पर्नु नेपालकै लागि पनि एउटा खुसीको कुरा हो जहाँ विश्व भरबाट १०० जना पुरुषहरुको नाम सार्वजनिक भएको छ । ‘सेक्सीएष्ट म्यान अफ द वर्ल्ड’ को सूचि भने स्टारमोमिटर डट कमले सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।
ललितपुरका सिडियोले जावलाखेलमा रहेको तरकारी बजारका घरटहरामा आफै डोजर लगाए
अविरल वर्षासंगै खोला बढेपछि पुल नभएकै कारण बिद्यार्थी पढाई छोड्न बाध्य ….
रवि लामिछानेलाई रिहा गर भन्दै चितवनमा उर्लियो जनसागर – हेर्नुहोस् भिडियमा
३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १०:३१ August 16, 2019 Nepali Mato
भारतीय प्रहरीको दादागिरी कहिले सम्म ? नेपाली भूमिमा आएर गरे यस्तो अत्याचार
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०९:४३ August 2, 2019 Nepali Mato
लाख पारिश्रमिक बनाए पनि बिष्णु माझिका एक पछि अर्को गीत सार्वजनिक
२० बैशाख २०७६, शुक्रबार १९:४३ May 3, 2019 Nepali Mato
२८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०८:०० June 11, 2019 Nepali Mato
जनप्रतिनिधि – काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी विदेश तिर
१ भाद्र २०७६, आईतवार ०७:५८ August 18, 2019 Nepali Mato
१८ मंसिर २०७४, सोमबार १०:२५ December 4, 2017 latestnews